Sawirro: Wasiirka difaaca oo kormeeray kulliyad milateri oo Turkigu ka dhisayo Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Wasiirka difaaca xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya, C/qaadir Sheekh Cali Diini, ayaa maanta kormeer ku tagay goob laga dhisayo Kuliyada Saraakiisha Xoogga Dalka Soomaaliyeed, waxana kormeerka ku weheliyey Taliyaha Ciidamadda Xogga dalka Jen. Daahir Aaden Cilmi iyo saraakiil kale.
Wasiirka ayaa soo kormeeray goobta ay dowladda Turkigu ka dhisayso xerada, isagoo sidoo kalena warbixinno ka dhageystay Injineerka howshaasi gacanta ku haya ee Turkida ah.
Wasiirka Gaashaandhigga C/qaadir Sheekh Cali Diini ayaa tilmaamay in uu aad ugu faraxsanyahay sida ay u socoto dhismaha xerada uu maanta kormeerka ku tagay, isagoo intaasina ku daray in dhismaha xeradan uu muhiim u yahay wasaaradda gaashaandhiga dalka.
“Waxaa wax lagu farxo ah horumarka iyo dhismayaasha cusub ee ka socda xeryaha ciidamadda, waana mid qof walba oo Soomaali ah farxad gelin kara, sidaas darteed waxaan u mahadcelinayaa dowladaha aan walaalaha nahay ee qeybta ka qaadanaya horumarka ciidamadda Soomaaliyeed gaar ahaan dowladda Turkiga oo howshan gacanta ku haysa” ayuu yiri Wasiirka Difaaca Soomaaliya, C/qaadir Sh. Cali Diini.
Wasiirka Difaaca Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, ayaa xusay in Wasaaraddu ay sii wadi doonto howlaha dib u dhiska ah ee lagu sameynayo dhammaanba xarumaha ay leedahay Wasaaradda Difaaca.
Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa horay magaalada Muqdisho uga bilowday dhismaha xero lagu tababaro ciidamada xooga, iyadoo xeradaas laga dhisayo dhulka Xeradii Agoonta booliska ee degmada Hodon.
Imaaraadka Carabta oo biyo gelin ku sameynaya magaalada Hargeysa